Silicones ukubonisa iimpawu ezininzi luncedo - China Jution abicah & sokuhlanganisa
Silicones ukubonisa iimpawu ezininzi eziluncedo
Silicones ukubonisa iimpawu ezininzi luncedo, kuquka: 
Phantsi conductivity thermal
Phantsi iikhemikhali reactivity
uzinzo Thermal (rhoqo weepropati phezu ebanzi ubushushu uluhlu -100 ukuya 250 ° C).
Ukukwazi yokugxotha amanzi kwaye enze amatywina manzi.
Ngaba awunamatheli substrates ezininzi, kodwa ithobela kakuhle kakhulu kwabanye, umz yeglasi.
Akaxhasi ukukhula ekuzakuqalwa.
Ukumelana mpilo, ozone, kunye yiultraviolet (UV) ukukhanya. Lo mhlaba ikhokelele ukusetyenziswa kwezi silicones kwishishini lokwakha (umz Ipeyinti, ukhuseleko emlilweni, Injengokubengezela seals) kunye noshishino lweemoto (gasket lwangaphandle, ngombala wangaphandle).
Iipropati usambathisa Electrical. Ngenxa abicah kukwazi ukwakhiwa ukuba zombane insulative okanye conductive, kufanelekile ukuba uluhlu olubanzi izicelo zombane.
Permeability igesi High: bushushu (25 ° C), lo permeability ye abicah rubber ukuba neegesi ezifana oxygen malunga amaxesha 400 [ucaphulo kwakufuneka] ukuba butyl irabha, ukwenza abicah luncedo kwizicelo zonyango okunyuke nomoya ayinqwenelayo. Kwelinye icala, rubbers abicah ayikwazi ingasetyenziswa apho amatywina gas-tight ayimfuneko.
Abicah ukuba ziphuhliswe zibe irabha kuhanjwa, apho iye ezinye iimpawu, ezifana ukuba FDA liwuthobele. Oku udlulisela ngemisebenzi abicah kuhanjwa ukuya kumashishini ezidinga yococeko, umzekelo, ukutya neziselo kunye amayeza.